एक छिन् हाँसौ !!! | कुवेतको पहिलो नेपाली अनलाईन पत्रिका
← बाल छ, बाल छैन ! (ब्यंग्य)
रक्षकमाथि नै आक्रमण !! →
एक छिन् हाँसौ !!!
Posted on 21/07/2011 by राजु गुरुङ्ग | टिप्पणी छोड्नुहोस्
1) एउटा निकै मोटे मानिस डाक्टरको सल्लाह लिन पुग्छ।
डाक्टर: धेरै नै मोटाइ सक्नु भएछ। तपाईं अब तीन महीना जति बिहान दुईवटा र राती दुइवटा सुक्खा रोटी खानुस्।
मोटे: खाना अघि की खाना पछि हजुर?
2) दुइजना मिलेर बैंक फुटाए। पहिलोले एउटा सेफ फोर्यो र अधेरोमा छामछुम पार्यो। दही पो रहेछ। यसो चाख्यो बिग्रिन लागेको रहेछ। अर्को फोर्यो त्यसमा पनि दही नै। यो चाँही ताजा रहेछ। उसले अर्कोलाई भन्यो,” ओइ हामीले बैंक भनेर डेरी त फोरेनौ?” अर्को बाहिर गयो अनी एकछिन पछी आएर भन्यो,” होइन यो त बैंक नै हो। बाहिर साइनबोर्डमा त स्पर्म बैंक लेखिएको रहेछ।
3) “एकजना मान्छे आफ्नो डाक्टर साथीसँग सल्लाह गर्दै थियो। “मेरो बुढिको कान एकदम कमजोर छ । कहाँ जचाँउदा ठीक होला?” साथीले सल्लाह दियो,”कानको बिशेषज्ञहरु त धेरै छ नि काठमाडौंमा । आज घर गएर भाउजूको कान कत्तिको कम्जोर छ जाँच गर । पछाडी फर्केको बेला बोलाउ, सुनेन भने अझ नजिक गएर बोलाउ।” बेलुकी घर पुग्दा उसको श्रीमती चुल्हामा केहि पकाउदै थिइन् । उसले पछाडिबाट बिस्तारै सोध्यो, ” के पकाउदै छौ ?” केहि जवाफ आएन । अझ नजिक गएर अलि ठुलो स्वरले सोध्यो, “के पकाउदै हो ?” फेरी जवाफ आएन । अब चही पछाडिनै गएर सोध्यो,”होईन के पकाउदै छौ ?” बुढीले अगाडी फर्केर भनिन्,” तेस्रो चोटी भन्दै छु हलुवा भनेर । के भो तपाईंको कान ?”
4) बाउले एउटा रोबोट किनेर ल्याएछ। झुठो बोलेको थाहा पाउने रोबोट। झुठो थाहा हुने बित्तिकै रोबोटले एक झापड हान्दो रहेछ। राती खाना खाने बेला भयो।
बाउ: छोरा आज तँ कहाँ गएको यतिबेलासम्म?
छोरो: रमेशको घरमा पढ्न।
रोबोटले एक झापु हान्यो।
छोरो: होइन, रिताको घरमा थिँए।
रोबोटले अर्को झापु हान्यो तिरिमिरी हुने गरी।
छोरो:सरी! रितासँग फिल्म हेर्न गएको थिँए।
बाउ: गधा! तेरो उमेरमा म कुनै केटीसँग त्यसरी फिल्म हेर्न गइन।
रोबोटले अर्को झापड बाउलाई हान्यो।
आमा: हा हा हा यो चाँही पक्का तपाईंको छोरो हो।
रोबोटले अर्को झापड आमालाई हिर्कायो।
5) एउटा फटाहाले जाली नोट छाप्दा झुक्किएर पन्ध्र रुपैयाँको नोट पनि छापेछ। “धेरै नै छापियो। शहरमा त कसैलाई झुक्याउन सकिदैन गाँउतिर जान्छु।” भनेर निकै टाढाको गाँउ गएछ। त्यँहा एउटा सानो पसल रहेछ। त्यँहा एकजना बुढोमान्छे रहेछ। फटाहाले एउटा पन्ध्र रुपैयाँको नोट दिदै भनेछ, “बाजे यो नोट साटिदिनोस् न।” बुढाले ओल्टाइ पल्टाइ हेरेछ, अनी हुन्छ भनेर भित्र गएछ। बुढाले २ वटा नोट फिर्ता दिएछ एउटा सात रुपैयाँको एउटा आठ रुपैयाँको।